पोखरा उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित व्यवसाय व्यवस्थापन तालीम समापन - Samachar PatiSamachar Pati
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित व्यवसाय व्यवस्थापन तालीम समापन
सामान्य परिवर्तनले पनि व्यवसाय बिस्तारमा सघाउँछ : कार्यवाहक अध्यक्ष कोइराला
पोखरा, २ फागुन । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आफ्नो ६५औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना गरिएको व्यवसाय व्यवस्थापन विषयक ५ दिने तालीम बुधबार सम्पन्न भएको छ । तालीममा पोखराका विभिन्न व्यवसायिक संस्थाका १६ जना प्रशिक्षार्थीको सहभागिता रहेको थियो । तालीम व्यवसाय विस्तार, व्यवसाय र बजारीकरणमा नयाँ प्रविधी तथा सीपको प्रयोगमा केन्द्रित थियो ।
तालीम समापन कार्यक्रममा प्रमाणपत्र बितरण गर्दै कार्यक्रम तथा संघका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण कोइरालाले तालीमलाई व्यवसाय बिस्तारमा लगाउन आग्रह गर्नुभयो । ‘सामान उही भए पनि त्यसलाई तलमाथि गरेर सजावट परिवर्तन गर्दा ग्राहक आकर्षित हुन्छन्’, संघका कार्यबाहक अध्यक्ष कोइरालाले भन्नुभयो,‘तालीमले पनि आफूले थाहा पाइरहेको विषयलाई नयाँ तरिकाले प्रयोग गर्न सिकाउँछ ।’ कार्यवाहक अध्यक्ष कोइरालाले बजारमा भित्रिएका विज्ञापनका नयाँ शैली, प्रविधीको प्रयोग तथा नयाँ व्यवसायका सम्भावनाबारे पनि व्यवसायीहरुले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संघका महासचिव अर्जुन पोखरेलको संचालन रहेको समापन कार्यक्रममा कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रमान बिजुक्छे र प्रशिक्षक रामप्रसाद त्रिपाठीले पनि सहभागीहरुलाई प्रमाणपत्र बितरण गर्नुभएको थियो । समापन कार्यक्रममा बोल्दै तालीमका प्रशिक्षक तथा आयोजक संस्था औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान पोखराका प्रमुख रामप्रसाद तिवारीले सिकेका कुरा व्यवहारमा उतार्न आग्रह गर्नुभयो । संघका कोषाध्यक्ष तथा तालीम व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक चिनु गुरुङले आउँदा दिनहरुमा पनि यस्ता तालीमहरु आयोजना गरिने बताउनुभयो । प्रशिक्षार्थी उमा लामिछाने र जगदिश लामिछानेले आफूहरुलाई लेखालगायतका थप तालीमको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
स्वर्गीय गजेन्द्र भण्डारी स्मृती सृजनशिल पत्रकारिता पुरस्कार २०७४ पत्रकार भिमपाणी वराललाई
८ दिन देखि बेपत्ता ओमराज पौडेलको मोबाइलमा ६८ पटक फोन हान्ने को हो ? १ महिलाको संलग्नता रहेको प्रहरीको भनाई ! हेर्नुहोस यस्तो रहस्य बाहिरियो
नागबेली टोलका महिलाहरुलाई उद्घोषण तालीम